Bvudzi rinodzokorodza - Pfungwa, masitayera, Colors uye Zvimwe | Bezzia
Susana godoy | 06/05/2021 14:00 | Runako
Iwe unoda kubvisa here makore mashoma asi pasina kuenda kuburikidza nekamuri yekuvhiya? Ipapo isu tine mhinduro yauri kuda nekuti iri nezve iyo vhudzi rinomutsiridza. Pfungwa dzekuita kuti utaridzike sehudiki asi zvakasikwa uye ipapo.
Zvakare, haufanire kunetseka nekuti Isu tinotsvaga rakanakisa rebvudzi uye bvudzi rinoenderana newe zvakanyanya, pamusoro pekutora iwo makore izvo zvinongoonekwa chete kubva zvino muDNI. Gadzirira shanduko yako yakanyanyisa, asi gara uchibata kumeso, nemazano aya atinokusiira! Wakagadzirira here kutora iko kunyura?
1 Ndeapi mabvudzi anomutsiridzwa zvakanyanya?
1.1 Bob akacheka pamusoro pemapfudzi
1.2 Square uye asymmetrical akachekwa
1.3 Bvudzi repakati nemafungu
1.4 Pixie maitiro ane bangs
2 Ndeupi wakanyanya kugadzirisa bvudzi bvudzi
3 Haircuts dzevakadzi vanopfuura makumi mana
4 Maitiro ekuziva kuti ndeipi yakakodzera kugerwa
5 Bvudzi rinodzoreredza pamakumi mashanu
6 Bvudzi rakatemwa revakadzi 2021
Ndeapi mabvudzi anomutsiridzwa zvakanyanya?
Kune vhudzi rakati wandei rinomutsiridza uye nekuda kwechikonzero ichocho, tinogona kugara tichisarudza iyo inonyatsokodzera maficha edu pamwe nezvatinofarirawo zvacho. Sezvo chinangwa cheizvi zvese ndechekusiya iro regore regore kuseri asi zvakare kuzvivandudza isu mune nyaya yemabvudzi. Uye ndezvekuti chete nedanho rakadai, tichave tichitotanga munzira kwayo. Ndeapi akacheka akakodzera chaizvo kufunga nezvazvo?
Bob akacheka pamusoro pemapfudzi
Kucheka kwemaitiro aBob kunogona zvakare kuve kwakasiyana senge sarudzo dzatinoda kuwana nhasi. Asi chaizvo iyo yatinayo muchimiro cheman'a chisingambodarika mapendekete uye ine kupera zvishoma, ichave iri imwe yemakambani akanakisa aunogona kuve nawo. Ichakuunzira zvese kutsva uye kujairika, saka iwe uchaona yakanyanya kuwedzera yekuvandudza shanduko.
Square uye asymmetrical akachekwa
Iyo square cut in general ichakubatsira iwe mukutumwa kwedu nhasi. Asi kana iwe uchida kuwedzera kubata kwekutanga, saka enda kune asymmetrical magumo. Ndokunge, iwe unenge uine yakatwasuka hafu bvudzi asi mune epamberi makiyi, ayo anodonha akananga kumeso, isu tichavarega ivo vachireba. Saka ichave yakagurwa mativi, yakareba kumberi uye ipfupi kumashure.
Bvudzi repakati nemafungu
Ichokwadi kuti nebvudzi repakati tinogona kugadzira zvitaera zvakasiyana. Iyo yatichangobva kutaura uye asymmetric iwe yaunogona kupfeka yakatsetseka kuti iyo mitezo iwedzere kuoneka. Asi yeuka izvozvo bvudzi rebvudzi rinogara rakafanana nehudiki uye kuravira kwakanaka. Naizvozvo, iwe unogona kubheja pane mamwe akacherechedzwa mafungu kana yakasarudzika uye disheveled maitiro anosiya vhoriyamu kune rako bvudzi. Ndeupi waunonyanya kufarira?
Pixie maitiro ane bangs
Kana iwe uchitove uchida kukanganwa nezvepakati bvudzi kana bvudzi refu zvakajairwa, iyo Pixie yakatemwa ichave zvakare shamwari yako yepamusoro. Iwe uchapfeka bvudzi rako pfupi, ndosaka rakanziwo 'murume akacheka' nguva yadarika. Asi mune ino kesi isu tichagara tichisarudza ayo akasiyana uye isu tinosiya rakakoshwa mupendero uye zvishoma vhoriyamu kumusoro kwemusoro. Iwe unonyatsonzwa kunakidzwa kupfuura nakare kose!
Ndeupi wakanyanya kugadzirisa bvudzi bvudzi
Hapana mubvunzo rumwe rwemavara akakodzera kutiona tichimutsiridzwa ndere blonde, kunyangwe riine mimvuri. Ndokunge, isu tichabheja pane akareruka mavara nekuti anovhenekera kumeso zvakanyanya. Mimvuri miviri yakareruka kupfuura yako yepasi kara ingatove imwe yeimwe huru nzira dzekutanga kunakidzwa nekuwedzera kwehudiki. Ndinofanira kupfeka sei bvudzi rangu? Zvakanaka, nezvakaratidzwa uye kuratidzwa zvirinani pane kungovavarira vara rimwe chete kana hunyoro.
Ndokunge, kusanganiswa kweaya maratidziro ichave akanakisa emhinduro. Zvakanaka, bheja pazvakanaka zvinoonekera uye kwete zvakawandisa seye 'Bhabhironi'. Kunyangwe chiri chokwadi kuti maitiro anozivikanwa se 'Contouring', haizi nyaya yezvekugadzira chete, asiwo yebvudzi. Izvo ndezvekuisa dzakakwirira dzakatenderedza kumeso, kubatanidza mwenje mwenje kuti ugadzire iwo mwenje nerima izvo zvinopa mhedzisiro yakanaka kudaro.. Nekudaro, muchidimbu muchidimbu chemavara isu tinofanirwa kutaura kuti iwe unofanirwa kubheja pane goridhe kana huchi kupedzisa, nekuti navo uchagara uchikunda nekupfava maficha.
Haircuts dzevakadzi vanopfuura makumi mana
Makore makumi mana mumukadzi achiri iwo matsva makumi matatu. Asi ichokwadi kuti inogona kunge iri nguva yekuchinja uye pakati pavo, isu tichatanga kufunga nezveveve bvudzi rinomutsiridza. Iwe unogona kusarudza iyo Bob cut iyo yatambotaura kare kana, ye bvudzi rakapfupika asi uchisiya mativi akareba, kubheja parutivi bangs. Ehezve, kana bvudzi refu ichiri chinhu chako, saka ramba uchichiedza. Unogona kuzvimonera zvishoma uye kubheja pakuwedzera zvimwe zvakakosha izvo zvinopfava maficha. Masitayera ane hunhu husina kunaka, kungave mune bvudzi rakasununguka nevhoriyamu kana kuunganidzwa, hakugone kushomeka panguva ino futi.
Rudzii rwebvudzi mukadzi ane makore makumi mana ane? Kana isu tatova kujekesa pamusoro peapi mabvudzi ekusarudza, ikozvino iko kwachinjika kwemavara zvakare. Dzivisa iyo yakareruka blonde uye kubheja pane jecha toni, yendarama nuances, zvakakosha zveakasiyana mapedzero ekuwedzera mamwe mwenje kana goridhe blonde, nekuti izvo zvichatipa isu tese zvinogoneka kubwinya. Kana isu hatikwanise kukanganwa iyo hazelnut ruvara nerwendarama kuratidza kana chokoreti ruvara kana iwe uchida kuratidza kwako kutaridzika. Asi hongu, kana isu tichitaura nezverima toni, saka isu tinofanirwa kubheja pane inopenya magumo.
Maitiro ekuziva kuti ndeipi yakakodzera kugerwa
Pamusoro pekutevera mapatani ezera uye mavara, hatigone kukanganwa kuti isu tinofanirwa kutendeka kune edu maficha. Zvekuti isu tichave tichiswedera padhuze kana zvasvika pakusarudza mabvudzi anodzosera kumeso uye kumeso. Iwe unoda here kuziva izvo zvavari?
Oval face: Zvinotaurwa nezvake kuti ndiye mumwe wevanonyanya kufarira uye ane godo panguva imwe chete. Nekuti ruzhinji rwevhudzi kana bvudzi rinozokufarira. Iwe unogona kupfeka hafu yebvudzi, masaisai, mativi bangs, nezvimwe.
Round face: Imwe yesarudzo dzakanakisa ndeyekusarudza zvidimbu zvebvudzi rako, zvemabhendi epamberi uye zvakapfava uye zvakatwasuka, usingakanganwe bob rakatemwa kumapendekete, rinogara riri iro rinonyanya kufarira.
Chiso chemwoyo: Kanganwa nezve vhoriyamu iri kumusoro kwemusoro, asi iwe unogona kuenda kune iwo matanga ayo anotanga munzvimbo yechiini. Kune izvi zvinowedzerwa kuti iwe unogona kupfeka bvudzi refu uye kubheja pane yakaderera updos neiyo yakashatiswa mhedzisiro iyo yakabudirira kudaro.
Yakarongedzwa chiso: Kana kumeso kwako kwakanyanya kureba, saka zvakanakisa kusarudza kutemwa ne bangs. Iwe unogona kugadzirisa izvi kune zvaunofarira. Izvo zvisingakurudzirwe nderefu uye akanyatsotsetseka manes. Nekuti isu tinoda iwo manzwiro ekupfupisa kumeso uye kune izvi, vhoriyamu iri pamativi nemafungu anofanirwa kuve aripo.
Mutsara wek square: Kureba kwepafudzi bob ndeimwe yemazano akakwana erudzi urwu rwechiso. Matanho, mafungu uye kunyangwe chikamu chiri pakati chichava chombo chako chakanakisa.
Bvudzi rinodzoreredza pamakumi mashanu
Sezvatiri kuona, pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekukwanisa kuzvigadzirisa kune yedu zera uye manakiro. Naizvozvo, kana iwe uchinetseka kuti ndeapi mabvudzi anodzosazve pamakumi mashanu, isu tinokuudza kuti kune akawanda uye vhudzi rakakurumbira tipe kiyi:
Kune rimwe divi isu tinofunga nezvazvo vakakurumbira vakaita saJennifer Aniston kana Julia Roberts uye ivo vanoramba vachibheja pane vhudzi refu. Kune rimwe divi, riine zvidimbu uye rakatsetseka asi kune rimwe racho zvakare nemafungu akapfava ekuwedzera kufamba zvishoma uye nemhepo yevechidiki. Iwo mabara eparadhi uye musanganiswa wezvakakurumbira ichave shamwari dzako nyowani dzakanakisa.
Medium mane uye mafungu efungu pfungwa mbiri dzichiripo mune vakawanda vanozivikanwa saCate Blanchett, uyo anowanzoonekwa aine mutsetse wedivi. Iwe unogona kugara uchitamba neanopedzisa uye sarudza akaiswa curls kana tousled mhedzisiro.
Iyo Pixie yakatemwa uye yayo yekupedzisira kupera Ichowo chimwe chebheti dzinovandudza mumadzimai anopfuura makumi mashanu zvichikwira. Isu tatozvitaura uye ndezvekuti, kunyangwe iri pfupi bvudzi, ichatipa kutamba kwakawanda. Nekuti isu tichasiya iyo yepamusoro dhayeti kwenguva refu uye nekudaro tinogona kuipfeka nemabhengi kana kuizama zvakare kana zvasvika pakuenda kune yakasarudzika chiitiko. Kubata tousled kunogara kwakafanana nekunaka kwakanaka uye maitiro.
Bvudzi rakatemwa revakadzi 2021
Bvudzi-dhizaini rekugera rinodzoka muna 2021. Nekudaro, iwe haushamisike kana ikozvino nekusvika kwemamiriro ekunze akanaka iwe ukatanga kuzviona kwese kwese. Yakanga iri, yechokwadi, imwe yehunhu hwako hwevhudzi uye ichave zvakare. Ipfupi rakatenderera bvudzi rine bangs.
Chimwe chevhudzi zvakare rampages ndeye maneja asi akapfupika. Ehe, hapana chinhu kubva pakukwirira kweshaya asi ikozvino chichagara munzvimbo yenzeve. Iwe unogona kuipfeka yakanyatsotsetseka uye ine bangs, kana iri kune yako kufarira.
Hafu yemapfudzi akareba bvudzi rakapetwa. Pasina kupokana, imwe yeredzi bvudzi, iyo inotouya kubva kune dzimwe nguva asi ichienderera ichitsvaira. Nekuti inowedzera kufamba kwakawanda, sezvo ichiita kunge yakakwana bvudzi rebvudzi kune wavy kana rakamonana bvudzi.
Uyewo usakanganwa akareba bangs. Hongu, ivo vakapfeka asi mune ino kesi yakareba zvakanyanya kupfuura zvataive takajaira. Kana isu hatikanganwe mabhureki akavhurika neasymmetric pedza nekuti iwo akaitwa akareba kutembere.
Iye zvino iwe unoziva zvakawanda zvakawanda nezve pamusoro pekuveurwa kwevhudzi izvo zvinomutsidzira, izvo zvinounza kupenya uye izvo zviri mune zviri kuitika. Chii chichava chako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Vhudzi rinomutsiridza
Aya ndiwo marekodhi aunogona kutenga muna Chivabvu